Wararkii ugu danbeeyay qaraxii ka dhacay Islii-Fallo - iftineducation.com
aadan21 / December 8, 2012
iftineducation.com – Muuqalka iyo jawiga nawaaxiga Masaajidka Al hidaaya oo kuyaala Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa uu ahaa inta qaraxa uusan dhicin mid degan oo dadkii masaajidka ku tugtey salaadaha cishaha la dhacsanaa khudbad goobta uu ka jeedinayay Xildhibaanka laga soo doorto Xaafada Kuma kunje ee Magaalada Nairobi.
Daqiiqaqo kadib markii Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi uu soo gaba gabeeyay khudbadii ka jeedinayay gudaha masaajidka Alhidaaya oo kuyaala Wadada Jamka kana hadlayay xaalada Soomaalida ee islii ayaa waxaa laga maqley meel aaan sidaa uga fogeyn Masaajidka dhawaqa qarax xoogaan iyo sawaxan goobta hareeyay.
Markii uu qaraxa dhacayay ayaa waxaa la sheegay in Xildhibaan Yuussuf Xasan uu taagnaa iridkaq hore ee Masaajidka,halkaasi oo so’aalo ay ku weydiinayeen qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo iyagu ka maqan sharciga lagu joogo dalkan Kenya,hase ahaatee waxaa laga war heley Qarax dhacay iyo dhaawacyo goobta daadsan.
Inta la xaqiijiyey qaraxa xaley ka dhacay Xaalada Soomaalida ay degto ee Islii oo sida la tilaamay ahaa Bamka gacanta laga tuuraha ah ayaa waxaa ku dhintey ku dhowaad 4-ruux oo ay ku jiraan dad Soomaali ah,halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 20-ruux kuwaasi oo uu ku jiro Xildhibaaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ah mudane ka tirsan barlamaanka Kenya.
Gadiidka anbalasta ayaa waxaa daqiiqado kadib ay soo gaareen Nawaaxiga Masaajid Alhidaaya oo weerarka xaley ka dhacay,waxaana goobta laga daabuley dhaawacayada dadkii mashaqada ku wax yeeloobey oo uu ku jira Yuusuf Xasan,kuwaasi oo haatan lagu daaweynayo Isbitaalada magaalada Nairobi.
Xildhibaanka ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhaawacmey labada lugood,isagoona haatan lagu daaweynayo Isbitalaka Akhakhan ee Magaalada Nairobi,halka dhaawacyo kale iyana la geeyay Kenyaata Hosbitalka ee magaaladani.
Lama oga cida sida rasmiga ah uga danbeysay Qaraxii xaley lagu weeraray Masaajidka Alhidaaya ee magaalada Nairobi iyo kale oo maalmihii ugu danbeeyay ka dhacay meelo kale oo ka mid ah Xaafada Soomaalida ay degto ee islii,lakin weeraran noocan oo kale ah ayaa waxaa loogu bartey Kooxda Shabaab,mana jiro wax war ah oo kasoo baxay Hoogaanka Kenya.
Dhanka kale waxaa saaka degan xaalada Xaafada Soomaalida ay degto ee Islii,hase ahaatee waxaa bar bar socda Ganacsiga oo furmey baaritaano ay xaafada ka wadaan ciidamada Booliiska Dowlada Kenya,lamina sheegi karo hadii ay dad qabteen iyo in kale.
Khabiiro U Dhashay Japan Oo Soo Saaray Aallad Dadka Hadalka Badan Lagu Aamusiinayo War Hadii Aad..